Maalinta Caanaha Adduunka oo maanta ku beegan iyo sida…
1-da Bisha June oo maanta ku beegan, Qaramada Midoobay waxa ay u gooni yeeshay maalinta Caanaha Adduunka, kadib markii Hay’adda Cunnada iyo Beeraha ee hoostagta go’aamisay in lagama maarmaan yihiin Caanaha, loona baahan yahay in dadka la xusuusiyo.
Labaatan sano kahor sanadkii ayaa la shaaciyay maalintaan oo lagu daray liiska maalmaha dhacdooyinka u goonida ah ee xusuus qorka Qaramada Midoobay lagu qoray, kadib markii waaxyaha kala duwan ee hoostaga Hay’addaas ay soo jeedin sameeyeen lana ansixiyay.
Sanadka oo ka kooban 12-bilood, waxaa loo kala qaybiyay maalmo dhacdo ka dhashay iyo kuwo Hay’adaha dhexdooda u arkeen in liiska loogu daro si markiiba la sheego ama la gaaro ka sheekeenta magacooda loogu daro.
Xikmadda maalintaan loogu goonida yeelay, maadaama Nolosha Aadanaha waxa ugu badan ay yihiin Caanaha waxa ay Qaramada Midoobay ku sheegtay in dadka lagu xusuusinayo muhiimadda ay leeyihiin.
Caanaha waxaa loo qaybiyaa labo nuuc oo asal ahaan dareere ama hoore ah, qaybta 1-aad waa kuwo dareere dabiici ah, halka qaybta 2-aad ay tahay kuwo la fadhiisiyay ama budo laga dhigay laguna daray waxyaabo keydinaya in aysan isbadalin inta ay daasadda (Ganaca) ama caagga ku jiraan.
Si maalintaan loo muujiyo, Waaxda Qaramada Midoobay u qaabilsan howshaan waxa ay sameysaa waxyaabo soo jiidan kara indhaha dadka sida Tartamo ay ka qaybgalayaan dad magac sameeyay, Siyaasiyiinta Ol-olaha soo bandhigeysa, Dhaqaatiirta Nafaqeynta iyo meelo kale oo ay u arkaan in laga soo muujin karo maalintaan.
Falcelinta Bulshada ay ka sameeyeen Maalintaan ayaa sanadkii 2018-kii gaartay 1.1 bilyan oo Haash-taag la sameeyay, halka Baraha Bulshada ay kaga falceliyeen dad gaaraya 291 Milyan oo ruux.
Sanadkaan ma qorsheysna in la qabto munaasabado lamid ah kuwii sanadihii tagay lagu maamuusi jiray maalintaan sabab la xiriirta faafitaanka Cudurka Coronavirus oo xannibay isu socodka iyo kulanka dadka.
80-dal oo hoostaga Qaramada Midoobay ayaa sanadkii tagay laga maamuusay maalinta Caanaha Adduunka, waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa kamid ahaa dhibaatooyinka dalalka dhaqaalahoodu liito ay u maraan helista Caanaha.
Wasiirkii hore ee Daryeelka Beeraha Hindiya Shri Radha Mohan ayaa sanadkii 2017-kii kahor sheegay Guddi ay ku mideysan yihiin Beerelayda New Delhi oo xiligaas loo gartay in ay marti-geliyaan munaasabadda maalintaan muhiimadda Caanaha aan dabiiciga ahayn ee Qalalan u leeyihiin Nolosha dadka ku tiirsan.
Marka aynu eegno Soomaaliya, Muhiimad intee la eg ayay u leeyihiin Caanaha, maadama hoos udhac ku yimid isbitaalka Caanaha dabiiciga ah ee Xoolaha sida Geella, Lo’da iyo Ariga, sabab la xiriirta in dalka la keeno Caanaha Qalalan ee Gasaca (Daasadda) lagu keeno.
Dhibaatooyinka ka dhashay Musiibooyinka dabiiciga ah sida Abaarta iyo fatahaadda iyo waxyaabaha sababay barakaca dadka xoolo dhaqatada ah ayaa sal u ah in ay kordhaan isticmaalka Caanaha Qalalan ama budada ah ee (Caano Booraha).
Caanaha ayaa ah waxa ugu horeeyo ee lagu habo (Lagu qabo) ama uu nuugo Noolaha Naasleyda ah, waana qayb kamid ah Koriimadiisa, waana tan ay isku raaceen Qubarada Nafaqada in noolaha Caanaha naaska nuuga uu ka nafaqo iyo ka difaac fiican yahay kan kale.
axadle 2992 posts
Shaqada Cusub Ee Messi , Taatikada Uu Tijaabiyay Quique Iyo